အလှအပ - Bezzia | Bezzia
La လှပမှု ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောလယ်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ခံစားမှုမျိုးကိုရရှိရန်နည်းလမ်းရှာသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မဂ္ဂဇင်းသည်ဗေဒ၏ကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဤရှုထောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်အလေးထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှုထောင့်မှကြည့်ပြီးလှည့်ကွက်များနှင့်ဤလောကနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်အကြံပေးချက်များနှစ်ခုလုံးကိုပေးသည်။
ဤအပိုင်းတွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်စတင်ရန်အကြံပေးချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည် ထုတ်လုပ် မည်သည့်အရာဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်၊ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်များကိုလိုက်နာရန်ကြိုးစားရန်နာမည်ကြီးများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းကြည့်ရှုမည်။
မိတ်ကပ်, ဆံပင်ပုံစံတွေလက်သည်းများ၊ ရေမွှေးများသို့မဟုတ်အလှအပကုသမှုများကိုဤအပိုင်းတွင်လည်းတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် .
Primer ကိုသိလား။ သေချာတာကတော့၎င်းသည်လူသုံးအများဆုံးမိတ်ကပ်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းမသုံးရသေးလျှင်ဖြစ်သည်။
ပဝါကိုမည်သို့ဝတ်ရမည်နည်း။ လျင်မြန်။ လက်တွေ့ကျသောစိတ်ကူးများ
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
ပဝါဘယ်လိုတပ်ရလဲသင်သိချင်သလား။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှအပအတွက်ကြီးစွာသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သူတတ်နိုင်တာကြောင့် ...
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
ကြေးနီဆံပင်သည်အပြည့်အ ၀ ရှိသည်၊ ၎င်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ catwalks များတွင်နေ့တိုင်းတွေ့ရသည်။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့7ရက်ပေါင်း .
မိတ်ကပ်သည်ပျော်စရာ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ကစားရန်နှင့်ကြားခံအဖြစ်သုံးလိုသူတိုင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
မျက်နှာပေါ်မူတည်ပြီး blush ကိုဘယ်လိုလိမ်းမလဲ
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
blush ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲသိလား။ ဒါဟာတကယ့်ကိုရိုးရှင်းလွန်းပုံရတယ်၊ ငါတို့ကကိုယ့်ကိုအများကြီးရှုပ်ထွေးစေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ...
Eyelash perm: သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
Professional pedicure: အဲဒါကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
သင်ကျွမ်းကျင်သော pedicure ကိုရယူလိုပါသလား။ ဒါကြောင့်အခြေခံအဆင့်တွေဆက်တိုက်လိုက်လုပ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတင်လိုက်ပါ။
por တောရက်စ် လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်ကိုလိုက်နာခြင်းကကျန်းမာပြီးလှပတဲ့အသားအရည်ကိုရရှိဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ ...
၂၀၂၁ ဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်မိတ်ကပ်ပုံစံ ၄ မျိုး
ဆောင်း ဦး တံခါးကိုလာခေါက်သည်နှင့်အရောင်ပြောင်းလဲမည့်မိတ်ကပ်ပုံစံအသစ်များနှင့်အတူ ...
ဤဆောင်း ဦး ရာသီအတွက်ဆံပင်အရောင်များတွင်ခေတ်စားလာသည်
ဆံပင်ပေါ်မှာ aloe vera အသုံးပြုနည်း